Ị nwere ike mfe ịdọrọ ego si gị TopSlotSite akaụntụ, mgbe ọ bụla, site na dị iche iche ịkwụ ụgwọ ụzọ dị, site na isoro ntuziaka dị n'okpuru:
Pịa na "okwu ugwo" icon, sotere "ndọrọ ego" nhọrọ.
Họrọ gị họọrọ ndọrọ ego Method.
pịa ebe a to view our Withdrawal Policy
Below are the methods which you can use to withdraw funds from your TopSlotSite account. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" n'ihi na 3 Business days, during which time you can cancel the request.
Oke kacha ndọrọ ego ego kwa akaụntụ bụ (i) £3,000 / €3,000 / $3,000 / 30 000 kr kwa izu, and (ii) £6,000 / €6,000 / $6,000 / 60 000 kr kwa ọnwa, ma e wezụga n'ihe banyere aga n'ihu jackpot winnings.TopSlotSite ike, na naanị ezi uche, -amụba ndị a ókè ya kpọrọ òtù.
Olorra Management Ltd. mee ikike igbu oge na / ma ọ kwụsị na nhazi nke ego si arịrịọ ruo mgbe ikpeazụ ihu ọma e nyere maka ihe ọ bụla pụtara ìhè nkwụnye ego azụmahịa. Biko gaa na anyị Ajụjụ and ndọrọ ego Policy peeji nke maka ozi ndị ọzọ.